Ara-dalàna avokoa ny fitaovana rehetra tamin’ireo ivom-panadina­na notsidihin’ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambaratonga ambony notarihin’ny minisitra Blanche Nirina Richard. Anisan’ny notsidihan’izy ireo ny tetsy amin’ny Saint Michel Amparibe sy ny lisea Andohalo. Na izany aza, nisy tamin’ireo mpiadina ihany no tsy tonga. Nahatratra 97.136 ny totalin’ireo tsy afaka manerana ny Nosy ary mbola manana safidy ny nanohy izany nanomboka omaly. Tsiahivina fa tsy nisy intsony ny taratasy fiantsoana vaovao na ny “convocation” ho an’ireo mpiadina. Tsy niova ihany koa ny toerana nanadinana azy ireo sy ny efitranom-panadinana. Hentitra ny fiambenana amin’ny ankapobeny. Ho an’ireo mpiadina niatrika ny Bakalôrea teknika moa dia fantatra fa hivoaka amin’ny herinandro ny vokatra.
Legende : Nilamina ny fanadinana Bakalorea 2 ème session tamin’ny ankapobeny